काठमाडौँको सडकमा ओली समर्थकको यस्तो हर्कत: ओली नै ल'ज्जित्, चौतर्फी सुरु भयो वि'रोध ! (भिडियो हेर्नुहोस्) - Public 24Khabar
Home News काठमाडौँको सडकमा ओली समर्थकको यस्तो हर्कत: ओली नै ल’ज्जित्, चौतर्फी सुरु भयो...
काठमाडौँको सडकमा ओली समर्थकको यस्तो हर्कत: ओली नै ल’ज्जित्, चौतर्फी सुरु भयो वि’रोध ! (भिडियो हेर्नुहोस्)
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले झण्डै २ वर्ष लगाएर नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक पारित गरी गत वर्ष नै प्रतिनिधिसभामा पठायो।
मुख्य गैरवैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिने प्रावधानमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि समितिले प्रक्रियामा लगेर विधेयकलाई टुंगो लगाएको थियो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले २०७७ असार ९ गते समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गरेकी थिइन्।
तर, समितिले टुंगो लगाएको उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गर्नेतर्र्फ निवर्तमान सरकार इच्छुक देखिएन। विधेयक एक वर्षसम्म जहीँको त्यहीँ रह्यो। केपी ओली सरकारले एकाएक २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता ऐनमा संशोधन अध्यादेश जारी गर्‍यो। आफू नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि जसपालाई फकाउन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
झण्डै दुई वर्षअघि सरकारले रेल्वे विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गर्‍यो। ०७६ पुस १८ गते दर्ता भएको उक्त विधेयक सरकारले पहल नगर्दा राष्ट्रियसभाबाट अघि बढ्न सकेन। भारतसँग रेल किने पनि सञ्चालन गर्न कानुनी अभाव भएको भन्दै सरकारले ०७८ वैशाख २२ गते रेल्वे अध्यादेश जारी गरेको थियो। संसद् विघटनका बेला सरकारले १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो।
संसद नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठक (साउन ३) गते १५ वटा अध्यादेशहरू प्रतिनिधिसभामा पेश भएका छन्। अघिल्लो सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन अध्यादेश कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएको थियो।
१५ वटा अध्यादेश भने देउवा सरकारले नै प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ। राष्ट्रियसभामा भने असार १७ गते नै १६ वटा अध्यादेश पेश भएका थिए।
संसद नभएको बेला जारी हुने अध्यादेशहरू संसद बैठक बसेको ६० दिनभित्र सरकारले विधेयक ल्याएर प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्छ। तर, संसदमै विचाराधीन रहेका विधेयकमाथि जारी भएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक ल्याउने कि पुरानैलाई जगाउने भन्ने अन्योल देखिएको छ।
Previous articleरा’तारा’त भाइ’रल भएका जुम्ल्याहा दिदिबहिनीको एउटै घरमा बि’हे- अन्तर्वातामै हनिमुन देखि बच्चा सम्मको कुरा (भिडियो) सेयर गराै
Next articleदुर्घ’टनापछि टिका सानुको यस्तो अवस्था भयो । पलपल रोईन, आमाबुवा सम्झेर भक्का’निइन- Tika Sanu (भिडियो हेर्नुहोस) स्वास्थ्य लाभको कामना